Ukuhlaziywa ko- "Rainbow" nguDH Lawrence
Iincwadi Izikhokelo zoFundo
I-Rainbow , eyapapashwa ngowokuqala ngo-1915, yindlela epheleleyo kunye nehlelwe ngokufanelekileyo yeembono zeDH Lawrence malunga nobudlelwane bomtshato. Incwadana ibhekisela ibali lezizukulwana ezintathu zentsapho yesiNgesi - iBrangwens. Njengoko abalinganiswa abasemgangathweni bahamba kunye nangaphandle kwesikhokelo sebali, abafundi baziswa ubuso nobuso phambi kweengcamango ezithandekayo zokuthanda kunye namandla phakathi kweendima eziqhelekileyo zoluntu zamadoda, abafazi, abantwana kunye nabazali.
Lo mthetho wawuthetha ukuba i -Rainbow ibe yinto enxulumene nolwalamano ibonakala kwisihloko sesahluko sokuqala: "Indlela uTom Brangwen watshata ngayo umfazi wasePoland." Ukufunda ngokucophelela kuya kwenza kube lula ukuqonda ukuqonda kuka-Lawrence ngamandla-ngaphezu kokunyamekela kumtshato womtshato. Ngokudakisayo, yinto enomdla oza kuqala-ukukhwela kwamandla anemfuyo yabantu.
Kubomnye uMnumzana Tom Brangwen sifunda, "Wayenalo igunya lokuphikisana nokuchasana kweentlanzi kangangokuthi uya kuvuma izinto awazange azikholelwe." Ngako oko ukufuna kukaMass Brangwen kwamandla kubonakala kukuphela kothando ngoLidiya, umhlolokazi wasePoland onentombi encinane, uAna. Ukususela ekukhulelweni kukaLidiya ekuzalweni nasekugqibeleni, uLawrence ugxininisa ukuqonda komfundi kwiinkcukacha zobundlobongela bezopolitiko. Ibali lichaza uAna ukuba achaze umxholo womtshato kunye nokulawula.
Uthando luka-Anna, kunye nomtshato olandelayo, uWilliam Brangwen unxulumene nolawulo oluqhubekayo lwenkqubo yobuntsapho kwisizwe saseNgesi ngexesha. Kubuhlobo bomtshato besizukulwane uLawrence udala umkhukula wokubuza umbuzo we-nonconformist. U-Ana ubonisa ngokucacileyo ukungathandabuzeki kwakhe ngokuphathelele imigaqo yendalo yonqulo.
Siyifunde amazwi akhe angcolileyo, "Akunakunqweneleka ukusho ukuthi uMfazi wenziwa ngumzimba womntu, xa umntu ezalwa ngumfazi."
Njengoko i-zeitgeist yeli xesha, akumangalisi ukuba zonke iikopi ze -Rainbow zathathwa kwaye zatshiswa. Incwadana ayizange ishicilelwe eBrithani iminyaka eyi-11. Iinjongo ezingaphezulu zesisombululo malunga nale ncwadi, mhlawumbi, zibandakanya ukwesaba ukuvuleka kukaLawrence ekudaluleni ubuthakathaka bomntu ngaphakathi kunye nokungafuni ukufumana ukuxhomekeka okungenakuxhaswa okunokwenene kwendalo.
Njengoko ibali lingena kwisizukulwana sesithathu, umbhali ugxininisa kumgca wokubamba kakhulu we-book viz. Ursula Brangwen. Umzekelo wokuqala wokunyanzelwa kwe-Ursula yeemfundiso zeBhayibhile kukuphendula kwakhe ngokwemvelo kumntakwabo omncinane, uThesa.
U-Theresa uhlasele elinye itama le-Ursula - waphendukela kuye ekuphenduleni ukuqhuma kokuqala. Ngokungafani nenyathelo elizinikeleyo lobuKristu, i-Ursula ithatha njengomntwana oqhelekileyo ngokugubha umenzi wecala ekugqibeleni. I-Ursula ikhula ibe ngumlingiswa ophezulu owamnika umdali (uLawrence) isandla sokukhulula ukuhlolisisa isihloko esithi: ubungqingili. Ubunzima be-ursula ngothando lwakhe ngutitshala wakhe u-Winifred Inger kunye nenkcazo yoqhagamshelwano lwabo lomzimba luye lwahlaselwa ngu-Miss Inger ukunyaniseka kobuxoki benkolo.
U-Ursula uthando lomfana wasePoland u-Anton Skrebensky ngu-DH Lawrence ukuguquka komyalelo wokulawula phakathi kwamatritari-and-matriarchal values. I-Ursula iwela indoda ephuma kumzala wakhe wokuzalwa (uLydia wasePoland). ULawrence unikela ubuhlobo ukuba luhlulekile. Uthando-kunye noMandla luba luLuthando-okanye-Amandla kwimeko ye-Ursula.
Umoya wobuntu beminyaka elitsha, apho u-Ursula Brangwen ungummeli oyintloko, ugcina iqabane lethu elincinci ekulandeleni isithethe esisexesha elide lobukhoboka kunye nokuxhomekeka komtshato. I-Ursula iba ngutitshala esikolweni kwaye, nangona ubuthathaka bakhe, uqhubeka ehlala ngokwakhe endaweni yokuyeka izifundo kunye nomsebenzi othandweni lwakhe.
Njengazo zonke iinenveli zakhe, i -Rainbow ingqina ubungqina be-DH Lawrence yokugcina ubungakanani obufanelekileyo phakathi komgangatho onokwakha kunye ocacileyo weveli.
Ewe, siyaqonda u-Lawrence ngongoma obalaseleyo kunye nomgangatho wokubeka emagqabini ukuba yintoni enye into eyayinokuthi ivezwe ngaphakathi.
Kwi Rainbow , uLawrence akaxhomekanga kakhulu ekubonakalisweni kwintetho yencwadana. Ibali limi ngokwawo. Sekunjalo, isihloko sencwadana sibonakalisa yonke indawo ibali. Inqaku lokugqibela lencwadana yi-crux yomlinganiso ka-Lawrence womxholo. Ukuhlala yedwa kunye nokubukela umlobo esibhakabhakeni, sixelelwa ngo-Ursula Brangwen: "wabona ngobuninzi bomhlaba uphuhliso olutsha, ubuqhophololo obudala, obunobunzima bezindlu kunye namafektri abukhulile, ihlabathi eliyakhelwe kwisixhobo esilungileyo seNyaniso , efanelwe ezulwini. "
Siyazi ukuba umlambo kwiimbali zamasiko , ingakumbi kwisithethe seBhayibhile , luphawu loxolo. Wabonisa uNowa ukuba umkhukula weBhayibhile wapheliswa. Ngako-ke, umkhukula wamandla kunye nokunyamezela kuphelile ebomini buka-Ursula. Ingumkhukula owawunqobelele kwizizukulwana.
Imibuzo Encinci yeNtlanganiso kunye neNgxoxo
'I-Black Cat' - Izihloko kunye neMpawu
Iimpawu zokuQala eziQalayo zeNveli
'Ibali leHora' ngabantu
INkosi yeeNtlanzi: Imbali ebalulekileyo
'Izimbali ze-Algernon' Imibuzo yoFundo kunye neNgxoxo
Imibuzo Yehlabathi Elinobugorha Imibuzo Yokufunda kunye Nengxoxo
Isikhokelo soFundo seChekhov sika 'The Lady nge Pet Dog'
UWilliam Faulkner: Isifundo esiPhambili
Isikhokelo sokuFunda sikaAlbert Camus's Fall
Usuku lweNtetho ye-Infamy
Imephu yeNdalo yeRadioacactivity eMelika
Imilinganiselo yokuzimelela ekuPahleni ingenza ukuKhulelwa koKudala
INgqungquthela yase-Great Lakes Valley
Amarekhodi e-World Warekhodi ama-5000-iMitha
Isingeniso kwiNkolo yeJedi (iJediism) yabaqalayo
Ifayile yeFayili yokufa
Great Society of Lyndon Johnson
IiVideos zamaKhristu omculo kunye neeKharithani
Indaba kaKhisimusi kaLuka ngesiSpanish
AmaBhabha aseRoma kunye neNhlanzeko eRoma yakudala
Izixhobo ze-Orchestra yokuqala
Kazahkstan | Iinkcukacha kunye neMbali
6 Ukuzonwabisa Ukusebenzisa iLizwi elithi 'Ikati' ngesiFrentshi